Sajhasabal.com |जाजरकोटको ५० शय्याको अस्पतालमा बिरामी बोक्न डोको, एक लाख ५० हजारको अभावमा एम्बुलेन्स मर्मत भएन
विप्वल समूहका जाजरकोट इञ्चार्ज पक्राउ
सदरमुकाम बसेर गाउँको बजेट सक्दै स्थानीय सरकार
नयाँ शक्तिको ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी नेकपामा समाहित
सातै स्थानीय तहमा नेकपाको भेला
बादी समुदायको पीडा : न जग्गा, न काम
कर्णाली प्रदेश अर्थ समितिका सभापतिको गाडीमा आगजनी
संरक्षणका लागि कहिले ध्यान पुग्ला ऐतिहासिक देवलको ?
सेवा प्रवाहमा दुर्गमले उछिन्यो सुगमलाई
जन्ती बोकेको जीप दुर्घटनामा चारको मृत्यु
१५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन, मङ्सिर १५ मा उद्घाटन
जाजरकोट पासागाडखोलाको पुल सात वर्षदेखि पुल अलपत्र
सडक निर्माणसँगै गाउँमै मोटरसाइकल बिक्री
भेरी करिडोर : १३ ठाउँमा पुल निर्माण शुरु
किताब नहेरी शैक्षिक सत्र सकिँदै
जाजरकोटका दलित समुदायका बालबालिकाले पढ्न पाएनन्
गाउँ सुनसान, पाटन भरिभराउ
जाजरकोटमा बिरुवाबाट मनग्य आम्दानी
जिल्ला जानकारी | जाजरकोट - JKT
जाजरकोट नेपालका ७५ अाेटा जिल्ला मध्ये याे पनि एक हो। यो जिल्ला नेपालको पहाडी प्रदेशमा पदर्छ । याे मध्यपशि्चमान्चल विकास क्षेत्रमा पर्दछ । ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिने बाईसे राज्यहरू मध्येको एक राज्य जाजरकोट पनि हो। यहाँ समशिताेष्ण किसमकाे हावापानी पाइने गर्दछ ।
धार्मिक स्थलहरू जाजरकाेट जिल्लाकाे पश्चिमी भेग नदाइ डाव लाई प्रमुख धार्मिक स्थलका रूपमा लिइन्छ । त्यसैगरि मजकाेट गाविसकाे वडा नं ६ मा भैरवनाथकाे मन्दिर अवस्थित रहेकाे छ । याे मन्दिरमा बर्षकाे दुइपटक मेला लाग्ने र भैरवकाे पुजाअाजा गरिने गरिन्छ ।
अग्लाे पहाड याे जिल्लाकाे सबैभन्दा अग्लाे डाँडा भैरीकाे लेख पर्दछ । याे लेखमा विभिन्न किसमका हिमाली मृगहरू र अमूल्य धातु पाइने गर्दछ। याे लेखबाट कैलाली, अछाम, सुर्खेत, देलेख, कालिकाेट, जुम्ला, सल्यान, राेल्पा, डाेल्पा तथा अन्य हिमालहरू पनि देख्न सकिन्छ ।
झारकोट शब्दको अपभ्रंश भै जाजरकोट नाम दिइएको जनश्रुती रहेको पाइन्छ। पहिले याे ठाउँमा चारैतिर बाक्लाे झारजंगल भएकाे र बिचमा काेट जस्ताे परेकाे डाँडा भएकाेले यसलाई झारकाेट भन्दा भन्दै जाजरकाेट भएकाे भन्ने भनाइ छ ।
पौराणिक कालमा कर्णाली भेगमा (हाल जुम्ला जिल्लाको सिंजा क्षेत्रमा) खस जातीका मल्ल राजाहरुले एउटा बिशाल राज्यको स्थापना गरेको पाईन्छ । अहिलेको जाजरकोट जिल्लाको क्षेत्रपनि त्यसताका सोहि राज्यमा थियो । धेरै राजाहरुले राज्य गरिसकेपछि ई.स. १८३३ ताका जुम्ला राज्य टुक्रिएर स साना बाईसे चौबिसे राज्यको उदय भएको थियो । सोहि समयमा शाके सम्वत १३००–१४५५ को आसपासमा भेरी नदीको पश्चिमी किनारा स्थित जगतीपुरलाई जगतीसिंह भन्ने राजाले राजधानी बनाई जाजरकोटमा राज्य संचालन गरेका थिए । ईतिहास अनुसार त्यतिबेलाको जाजरकोट एउटा साम्राज्यको रुपमा बिकसित भएको साथै त्यसको सिमाना जुम्लाबाट दक्षिण गंगा नदीसम्म, पश्चिममा दैलेख र पुर्वमा गण्डकी नदीसम्म फैलिएको थियो । पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको बेलामा समेत जाजरकोटलाई हमला नगरी छुटै राज्यको रुपमा मान्यता दिएको र राज्य रजौटा ऐन २०१७ अनुसार पनि जाजरकोटी राजाको अस्तित्व कायम रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ । यस जिल्लाको सिमाना पूर्व:– रुकुम जिल्ला, पश्चिम:– दैलेख, जुम्ला र कालिकोट जिल्ला, उत्तर:– डोल्पा र जुम्ला जिल्ला र दक्षिण:– सल्यान र सुर्खेत जिल्ला पर्दछन् ।
भाैगाेलिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू
जाजरकाेट जिल्ला भाैगाेलिक रूपमा पछाडी परेपनि याे क्षेत्र प्राकृतिक रूपले धनी रहेकाे छ । यसमा क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय तथा रमणीय ठाउँहरू रहेका छन् । दशेरा गाविसकाे वडा नं १ मा पर्ने फाल्म भन्ने गाउँकाे सिरानमा रहेकाे मालिका गुफा एकदमै रमणीय र पर्यटकीय दृष्टिकाेणमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । याे गुफा चारैतिर प्राकृतिक रूपमा ढुङ्रगै ढुङ्रगाले बनेकाे छ । समुन्द्रि सतहदेखी करिव ३५६० मिटर उचाइमा रहेकाे याे गुफामा ढुङगाले बनेका शिव पार्वती,गणेश,विष्णुका मुर्ती रहेका छन् । ति मुर्ती हरू अाफै ढुङगाबाट बनेका छन् । गुफा लगभग ४०० मिटर भित्र रहेकाे छ भने त्यहाँ जानलाई भर्या्ङ बनाइएकाे छ ।
भकारे दह जाजरकाेट जिल्लाबाट १० काेष पश्चिम पर्ने मजकाेट गाविसकाे वडा नं ६ मा एकदम अनाैठाे खालकाे दह रहेकाे छ । त्याे दहमा एउटा खाेला माथिबाट बगेर अाउँदा एउटा ढुङगा मुनिबाट छिरेर अाउने गर्दछ । याे दहमा चारैतिर ढुङगाले घेरेकाे छ भने बिचमा गहिराे ताल रहेकाे छ र त्याे ताालकाे पानी भकारी जस्ताे परेकाले त्यसलाई भकारे दह नाम राखिएकाे भनाइ छ । दुइ नदीकाे बीचमा पर्ने याे दह १०० मिटर जति गहिराे छ भने त्यसैमा ४० मिटर अग्लाे झरना पनि झर्ने गर्दछ ।
जाजरकोट - JKT / समाज
जाजरकोटको ५० शय्याको अस्पतालमा बिरामी बोक्न डोको, एक लाख ५० हजारको अभावमा एम्बुलेन्स मर्मत भएन
Posted on: 23 Nov, 2020
मङ्सिर ८, जाजरकोट । पचास शय्याको अस्पताल रहेको सदरमुकाम खलङ्गामा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने गरिएको छ । एम्बुलेन्स बिग्रिएको दुई वर्षसम्म मर्मत नगरेपछि जाजरकोट अस्पताल एम्बुलेन्सविहीन भएको छ । अस्पतालको एम्बुलेन्स नेपालगञ्जको कल्लु ग्यारेजमा थन्किएको छ । दुईवटा टायर फेर्न र मोबिल इञ्जिन फेर्नका लागि दुई वर्षअघि एम्बुलेन्स ग्यारेजमा लगिएको भए पनि रकम अभावमा मर्मत हुन नसकेको चालक राकेशकुमार शाहले बताउनुभयो ।
एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान समस्या भएको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालनमा नरहे पनि चालकले भने नियमित तलब भत्ता खाइरहेका छन् । रेडक्रसको एम्बुलेन्स पनि बिग्रिएपछि जाजरकोटमा एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन । जिल्लानै एम्बुलेन्सविहीन हुँदा पनि मर्मत गरी सञ्चालन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु दुःखद् पक्ष रहेको नागरिक बताउँछन् । एम्बुलेन्स नहुँदा स्थानीयले स्ट्रेचर र डोकोको सहारा लिने गरेका छन् भने जिल्लाबाहिर लैजान सार्वजनिक तथा निजी गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
रु एक लाख ५० हजारको अभावमा अस्पतालको एम्बुलेन्स मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त व्यवस्थापक डा सुनिल पुनले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धर्मशिला बस्नेतले उक्त एम्बुलेन्स निकै पुरानो भएको र मर्मत गरे पनि दुर्गममा चलाउन मुस्किल पर्ने भएकाले प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नयाँ एम्बुलेन्स माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । भेरी नगरपालिकाले एम्बुलेन्स दिने घोषण गरेको वर्ष दिन बिते पनि अझै प्राप्त भएको छैन ।
उत्ता छेडागाड नगरपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो नगरपालिकाले आफैँ चिकित्सक नियुक्ति गरेर सेवा दिँदै आएको छ । जुनिचाँदे गाउँपालिकाले समेत सोही कार्य अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि बनाएर काम गर्दै आएका छन् । रासस